Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo ka hadlay howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo ay sameeyeen ciidamada amniga | Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo ka hadlay howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo ay sameeyeen ciidamada amniga
Published on February 23, 2013 by Mowliid · No Comments · 974 views
Hawlgallo ay sameeyeen ciidamada amniga ee maamulka Soomaaliland ayaa lagu soo qab qabtay dad farabadan oo looga shakisanyahay iney maleegayeen falal liddi ku ah amniga, iyagoo dhinaca kalena ka hadlay dilalka culimada iyo been abuurka Diinteenna suubban.
Dhawrkii cisho ee la soo dhaafay ayaa ciidamada Amniga ee Soomaaliland waxa ay hawlgallo ka wadeen magaalooyin ay ka mid tahay Hargaysa, waxaana lagu soo qab qabtay tiro dad ah, kuwaas oo looga shakiyay in ay maleegayeen falal ka soo horjeeda ammaanka Soomaaliland.
Wasiirka arimaha gudaha ee Maamulka Soomaaliland Maxamed Nuur Carraale ‘Duur’ ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay xafiiskiisa Hargaysa ku shaaciyay in hawlgalkaas lagu soo gacan geliyay dad aad u badan, kuwaas oo hadda ay ku socdaan baaritaanno culus, sida uu wasiirku sheegay.
Dhinaca kale wasiirka ayaa ka hadlay dilalka loo geysanayo mashaa’ikhda Diinta, isagoo culimada ugu baaqay in ay maamullada kala qeyb qaataan hawlaha Amaan sugidda ah, si looga hortago dhibaatooyinka loo gaysto dadka waxtarka u leh bulshada iyo dadka maatida ah ee aan waxba galabsan.
Wasiirku waxaa uu sheegay in hawlgallada hadda ka socda deegaannada Soomaaliland ay saameyn ku yeelanayaan dadka shacabka ah, balse waxa uu dadka rayidka ah ugu baaqay in aysan wax dhibaato ah u arkin hawlgalka socda.
Hawlgallada ay sameynayaa ciidamada amniga ee Soomaaliland ayaa kusoo beegmaya xilli ay dhawaan dawladda ingiriisku soo saartay warbixin lagu muujiyey ficillo atgagixiso oo kusoo fool leh dhulka uu ka arrimiyo maamulka Soomaaliland.